Voasambotra ary nosamborina noho ny fahafatesan'i Victorine
Raha ny vaovao farany navoakan'ny BFMTV sy Dauphiné Libéré, dia olona voarohirohy ho amin'ny fahafatesan'i Victorine no voasambotra ny talata lasa teo. Ity olona 25 taona ity dia ahiahiana ho manana rohy amin'ny fahafatesan'ilay tovovavy.
Ny fahafatesan'i Victorine, ahiahiana voasambotra
Rehefa avy naheno ny mpikaroka avy amin'ny sehatry ny fikarohana, ny olona 25 taona no notanana am-ponja ny talata lasa teo tokony ho tamin'ny 15 hariva, avy eo, nozahan'ny polisy sy ny mpanao famotorana ny tranony.
Raha ny marina, araka ny loharanom-baovao roa, dia toa niaiky ny zavatra nataony ny raim-pianakaviana. Etsy ankilany, ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao Grenoble dia tsy nanamafy izany vaovao izany.
ICC: ny fiantraikan'ny sazy amerikana amin'i Fatou Bensouda -…
Hamed Bakayoko dia manolotra bus 30 tapitrisa mankany Sol FC
Na izany aza, ny fampanoavana dia nilaza fa ny Alarobia hariva fa monina any Villefontaine ilay tovolahy. Raha ny marina dia mpifanila trano amin'ny fianakavian'ilay tovovavy izy.
Mpiambina amin'ny fahitana lavitra
Amin'ny lafiny iray, ny lefitry ny mpampanoa lalàna Boris Duffau dia nanambara hoe: "Efa fantatry ny zandarimaria sy ny rafi-pitsarana izy noho ny fandikan-dalàna isan-karazany." Izany dia nanjary nitatra ny fotoana nanànan'ny polisy mpitsara azy.
Na izany aza, ny fanenjehana dia tsy naniry ny hanome hevitra hafa intsony antony miafina fampianarana. Fa koa, hitazomana ny fahombiazan'ny famotopotorana izay mbola mitohy.
Raha tsiahivina, dia hita ny 18 septambra lasa teo ny fatin'i Victorine, tovovavy 28 taona, taorian'ny fahaverezana. Eny tokoa, vatana mangatsiakan'ilay tovovavy no hita tao amin'ny renirano iray Villefontaine. Saingy aorian'ny fizahana ny fizahana azy dia hita fa natelin'ny antoko fahatelo izy.
bryanekobe 1566 Lahatsoratra 0 hevitra
Kylie Jenner Disses Snapchat, Stock Drops By Over A Billion Dollars - Video
ICC: ny fiantraikan'ny sazy amerikana amin'i Fatou Bensouda - Jeune Afrique
Ny mpitondra fivavahana dia manao fihetsiketsehana manohitra ny fisintahana ao Bui